एंजियटेंसिन २ रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबी) को सूची र तिनीहरूको प्रयोगहरू र सुरक्षा जानकारी - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी भारी खेल स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य समाचार औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार समुदाय खेलहरु घरपालुवा जनावर समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार
मुख्य >> औषधि जानकारी >> Angiotensin II रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबी): प्रयोग, साधारण ब्रान्ड, र सुरक्षा जानकारी
औषधि जानकारी Angiotensin II रिसेप्टर ब्लॉकर (एआरबी) ले उच्च रक्तचाप र मुटुको विफलताको उपचार गर्दछ। यहाँ एआरबीका प्रकारहरू र उनीहरूको सुरक्षाको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
एआरबी सूची | एआरबीहरू के हुन्? | कसरी उनीहरू काम गर्छन् | उपयोगहरु | कसले एआरबी लिन सक्छ? | सुरक्षा | साइड इफेक्ट | लागत
उच्च रक्तचाप एक साधारण चिकित्सा अवस्था हो जसले सयौं लाखौं अमेरिकीहरूलाई असर गर्दछ। एंजियोटेन्सिन २ रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबीहरू) रक्तचाप कम गर्न प्रयोग गरिने औषधीहरूको एक वर्ग हो र यो औषधीको पहिलो प्रकार हो जुन डाक्टरहरूले यस अवस्थाको लागि तोक्छ। तिनीहरू अत्यधिक प्रभावकारी छन् र दशकौं देखि उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) को उपचार गर्न प्रयोग गरीन्छ। एआरबीहरू अन्य प्रकारका हृदय रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यस लेखले औषधिहरूको यस वर्गको एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ। हामी बिभिन्न ब्रान्ड र जेनेरिक नामहरू सूचीबद्ध गर्दछौं, उनीहरूको लागतको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछौं, कसरी लागूऔषधले कार्य गर्दछ, र उनीहरूको प्रयोगहरू र सुरक्षा विचारहरूलाई कभर गर्दछ।
हमला गर्दै (कैन्डार्टन) 30 १२7 प्रति ,०, १ mg मिलीग्राम ट्याब्लेट Candesartan कूपन पाउनुहोस् Candesartan विवरण
Avapro (irbesartan) 30 १०4 प्रति ,०, mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट इरब्सार्टन कुपनहरू पाउनुहोस् इरबर्स्टन विवरणहरू
बेनीकार (ओल्मेसारन) 30 १2२ प्रति ,०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ओल्मेसारन कूपनहरू पाउनुहोस् ओल्मेसारटन विवरणहरू
कोजार (लोसार्टन) 30 per per प्रति ,० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू लोसार्टन कुपनहरू पाउनुहोस् लोसारटन विवरणहरू
डिओभान (वाल्सरतान) 30 २44 प्रति ,०, 20२० मिलीग्राम ट्याब्लेट Valsartan कूपन प्राप्त गर्नुहोस् Valsartan विवरण
माइकार्डिस (टेलमिसार्टन) 30 १ per० प्रति ,०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेट टेलमिसार्टन कुपनहरू पाउनुहोस् Telmisartanicardis विवरण
एआरबीहरू प्रायः अन्य एन्टिहाइपरपोर्टिभ ड्रग्ससँग मिलाइन्छ - जस्तै एक मूत्रवर्धक वा क्याल्शियम च्यानल अवरोधक, प्रति दिन लिने औषधी लिने औषधीहरूको संख्या कम गर्न। तल केहि उदाहरणहरू छन्:
Exforge (valsartan र amlodipine)
एभ्लाइड (ईरबर्स्टन र हाइड्रोक्लोरोथिजाइड)
अज़ोर (ओल्मेसारन र एम्लोडाइपिन)
ट्विन्स्टा (टेलमिसार्टन र एम्लोडाइपिन)
Hyzaar (लोसार्टन र हाइड्रोक्लोरोथिजाइड)
डिओभन एचसीटी (वाल्सार्टन र हाइड्रोक्लोरोथियासाइड)
बेनीकार एचसीटी (ओल्मेस्टारन र हाइड्रोक्लोरोथिजाइड)
माइकार्डिस एचसीटी (टेलमिसार्टन र हाइड्रोक्लोरोथियासाइड)
एंजियोटेंसिन II रिसेप्टर ब्लकरहरू (एआरबीहरू) के हुन्?
Angiotensin II रिसेप्टर ब्लकरहरू - वा छोटोका लागि एआरबी - उच्च रक्तचापको उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधीहरूको एक वर्ग हो। जबकि सबै एआरबीहरू उच्च रक्तचापको उपचारको लागि एफडीए स्वीकृत हुन्छन्, केही एआरबीसँग अन्य क्लिनिकल अवस्थाहरू जस्तै हृदय असफलता, मधुमेह सम्बन्धित किडनी रोग, वा हृदय सम्बन्धी घटनाहरूको रोकथाममा प्रयोगको लागि एफडीए स्वीकृति हुन्छ। एआरबीहरू प्राय: विहित हुन्छन् र १ 1990 1990 ० को दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ।
एआरबीले कसरी काम गर्छ?
रेनिन-एंजियोटेंसिन-एल्डोस्टेरोन प्रणाली (RAAS) भनिने एक संचार नेटवर्कको प्रयोग गरेर शरीरले रक्तचाप र आवाजलाई नियमित गर्दछ। यस प्रणालीले मृगौलालाई रक्तवाहिनी र अन्य अ organs्गहरूमा संकेतहरू पठाउन अनुमति दिन्छ। मिर्गौलाले रेनिन भन्ने प्रोटीन उत्पादन गर्छ। यो प्रोटिन एन्जियोटेन्सिन २, हर्मोन बनाउन प्रयोग गरिन्छ जुन रक्त वाहिकाहरू, पिट्युटरी ग्रंथिहरू र एड्रेनल ग्रंथिहरूलाई रक्तचाप र रगतको मात्रा बढाउन भन्छ।
यस ठाउँमा एआरबीहरू आउँदछन्। यी औषधीहरूले एंजियोटेंसिन II को प्रभावहरू रोक्दछन् ताकि यो हार्मोन अन्य अंगहरूसँग सञ्चार गर्न सक्दैन। यसैले, एआरबीले रक्तचाप र रगतको मात्रामा वृद्धि रोक्दछ।
एआरबी रक्तचाप औषधीको अर्को वर्गसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ। एंजियोटेंसिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम इनहिबिटरहरू, वा ACE इनहिबिटरहरू छोटोका लागि पनि RAAS प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दछन्। यद्यपि ACE अवरोधकर्ताहरूले पहिले नै संकेतन क्यासकेडमा सञ्चार बिच्छेद गर्थे, संचारको अधिक लाइनहरू अवरुद्ध गर्थे। एआरबीले पछि कास्केड र ब्लक सिग्नलहरूमा हस्तक्षेप गर्दछ जुन रक्तचाप नियन्त्रणमा अधिक विशिष्ट हुन्छ। यस कारणका लागि, एआरबीले कम प्रतिकूल प्रभाव निम्त्याउँछ जब एसीई अवरोधकर्ताहरूको तुलनामा।
एआरबी के को लागी प्रयोग गरीन्छ?
सबै एआरबीहरू एफडीएका लागि अनुमोदित छन् उच्च रक्तचाप । केहि एआरबीहरू जस्तै लोसार्टन, क्यान्डेसारन, र भल्सार्टन पनि एफडीए स्वीकृत हुन्छन् विशिष्ट हृदय रोगको लागि कन्जेस्टेभ भनिन्छ। मुटुको असफलता । विशिष्ट एआरबीसँग अन्य एफडीए-अनुमोदित संकेतहरू समावेश छन्:
मायोकार्डियल इन्फेक्शन (हार्ट अट्याक) पछि बायाँ निलय डिसफंक्शनका बिरामीहरूमा सीभी घटनाहरूको रोकथाम।
गुर्दा रोगको कारण मधुमेह (प्रोटीन्युरिया / माइक्रोएल्बमिनुरिया)
बाँया ventricular hypertrophy
तलको चार्टले विशेष एआरबीको लागि एफडीए अनुमोदित संकेतहरूको सारांश दिन्छ:
संकेत ARBs प्रयोगको लागि अनुमोदित
उच्च रक्तचाप सबै एआरबीहरू
मुटुको असफलता Candesartan, valsartan
बाँया ventricular hypertrophy लोसार्टन, लोसार्टन-हाइड्रोक्लोरोथियासाइड
मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन Valsartan
मधुमेह को कारण गुर्दा रोग लोसार्टन, इबर्स्टन
एआरबीहरू अन्य क्लिनिकल अवस्थाहरूमा अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ।
जीर्ण गुर्दा रोग (CKD)
बिभिन्न एआरबीले अलि फरक गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ। यस कारणका लागि, केहि एआरबीएस केहि चिकित्सा शर्तहरूको लागि बढी उपयोगी छ। उदाहरण को लागी, क्यान्डर्सन छ माइग्रेन रोक्नको लागि प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्नुभयो यसको लिपोफिलिक गुणहरूको कारण।
जबकि धेरै एआरबीहरू एक विशेष अवस्थाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, विशेष एआरबी बिरामीहरूका विशेषताहरूमा निर्भर हुन आवश्यक पर्दछ। उदाहरणको लागि, hyparturicemia भएका बिरामीहरूमा लोसार्टन एआरबी छनौट हो, जबकि क्यान्डेशर्टन, ओल्मेसार्टन, र वाल्सारटनले यो अवस्था बिगार्न सक्छ। केहि एआरबीहरू केहि क्लिनिकल परिदृश्यहरूको लागि अरूलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। लोसार्टन उच्च रक्तचाप बिरामीहरूका लागि पहिलो रेखा विकल्प हो जुन स्ट्रोकको उच्च जोखिममा छन्। अन्तत:, एक बिरामीको लागि उत्तम एआरबी निर्धारण गर्न चिकित्सकको विवेकमा निर्भर हुन्छ।
कसले एआरबी लिन सक्छ?
धेरै एआरबीहरू बच्चाहरूमा उच्च रक्तचापको उपचारको लागि सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छन्। लोसार्टन, वाल्सार्टन, र ओल्मेसारनसँग DA बर्ष भन्दा बढी बच्चाहरूको लागि प्रयोगको लागि एफडीए स्वीकृति छ, जबकि क्यान्डेशर्टनले १ बर्ष भन्दा बढीका बच्चाहरूमा प्रयोगको लागि स्वीकृति छ। नेशनल किडनी फाउण्डेशनका अनुसार यी औषधिहरू CKD को प्रगति ढिलो गर्न एजेन्टहरू रुचि हुन सक्छ बच्चाहरूमा। अन्य एआरबीहरू बच्चाहरूमा अफ-लेबल तोकिए पनि, यस जनसंख्यामा सुरक्षा र प्रभावकारितालाई समर्थन गर्न सीमित डाटाको बावजुद। बच्चाहरूमा एआरबीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगको लागि उमेर र तौलको आधारमा खुराक समायोजन आवश्यक पर्दछ।
उच्च रक्तचाप र चिन्ता को लागी बीटा ब्लकर्स
एआरबीहरू सामान्यतया वयस्कहरूमा प्रयोगको लागि सुरक्षित र प्रभावशाली मानिन्छ। सबै भन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू मामूली हुन्छन् र चक्कर, सिर दुख्ने, खोकी, र उनीहरु सम्मिलित हुन सक्छ। केही बिरामीहरूले कम सहन योग्य साइड इफेक्टको अनुभव गर्न सक्दछन्। समस्याग्रस्त साइड इफेक्टहरूको बारेमा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि उपचारलाई सोही अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ।
एआरबीहरू कम उमेरका बिरामीहरू जत्तिकै सुरक्षित र प्रभावकारी हुन्छन्। वृद्ध जनसंख्या रेनल रिप्लेसमेन्ट थेरापी प्राप्त गर्ने अधिकांश बिरामीहरूको गठन गर्दछ, र एआरबीले किडनी रोगको प्रगतिलाई ढिलो गरेर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान गर्न सक्दछ। एआरबी लिने वृद्ध बिरामीहरूमा उल्लेख गरिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव सीरम पोटेशियम (हाइपरक्लेमिया) बढाइएको थियो। सीरम पोटेशियमको करीव निगरानी यस बिरामीको जनसंख्याको लागि सिफारिश गरिन्छ किनकि उमेर र comorbidities को संख्याको साथ हाइपरक्लेमियाको जोखिम बढ्छ।
कलेजो बिरामीको साथ बिरामी
कलेजो रोगका बिरामीहरू जो एआरबी लिइरहेका छन् उनीहरूलाई थोरै मात्रामा सुरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। लोसार्टनको सुरू खुराक कलेजो बिरामीको साथ बिरामीहरूको लागि २ mg मिलीग्राम हो; त्यो सामान्य सिफारिश सुरू खुराकको आधा हो। क्यान्डेरसनका लागि प्याकेज सम्मिलित लिवर रोग भएका बिरामीहरूको लागि आधा सामान्य सुरु खुराक प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छ। किनकि एआरबीहरू मुख्यतया कलेजोले शरीरबाट हटाइन्छ, कम खुराकबाट सुरु गर्नु र यस बिरामीको जनसंख्यामा होशियारीपूर्वक उपचार बढाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
के एआरबीहरू सुरक्षित छन्?
वाल्सारटन, लोसार्टन, र इरबेसार्टन-युक्त उत्पादहरूको बहु वितरकहरू एनएमबीए अशुद्धिको कारण फिर्ता बोलाइएको थियो। सम्झनाहरू २०१ 2018 को बीचमा शुरू भयो र २०१ September सेप्टेम्बरसम्म जारी रह्यो अपडेट र प्रेस घोषणाहरु यी सम्झनाहरू बारेमा एफडीए द्वारा अनलाइन पोष्ट गरिएको छ, साथै ए विस्तृत सूची एआरबी औषधीहरूको चलिरहेको रिकलमा समावेश सबै उत्पादनहरू। रिकलबाट प्रभावित वितरकहरूले समावेश गर्दछ, तर सीमित छैन, Teva, Macleods, Mylan, Torrent, Aurobindo, Solco हेल्थकेयर, प्रिन्स्टन, र क्याम्बर फार्मास्यूटिकल्स। तपाईंको फार्मासिष्टले प्रश्न वा सम्बन्धित चिन्ताहरूको साथ मद्दत गर्न सक्छ याद गरिएका औषधीहरू।
कुनै पनि एआरबी औषधि नलगाउनुहोस् यदि यसको कुनै पनि तत्त्वहरूमा अतिसंवेदनशीलता थाहा छ।
एआरबीहरू कम सोडियम (हाइपोनाट्रेमिया) र उच्च पोटासियम स्तर (हाइपरकेलेमिया) सहित इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन भएका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ। एआरबीहरूले यी असंतुलनलाई बिगार्न सक्छ घट्दै सोडियम प्रतिधारण मिर्गौलाको निकटतम र डिस्टल ट्युबल्समा, र पछि स du्कलन डक्टमा पोटेशियम स्राव घट्दै ।
दुर्गन्धित रोग, बिरामी धमनी स्टेनोसिस (आरएएस) को रूपमा चिनिने दुबै मृगौलामा, वा एकल कार्यात्मक गुर्दा र आरएएसको निदानका बिरामीहरूले एआरबी लिनुहुन्न। एआरबीले मृगौलामा रक्त संचारलाई असर गर्छ, जसले गम्भीर गुर्दे रोग भएका बिरामीहरूमा ग्लोमेरूलर फिल्टरेशन दर घटाउन सक्छ। यसले किडनीको कार्य बिगार्न सक्छ र मृगौला फेल हुन सक्छ।
त्यस्तै गरी, एआरबीको साथ थालनी सुरु गर्नु अघि बिरामीहरूमा भोल्युम कम हुने सुधार गर्नुपर्दछ। जब बिरामीको मात्रा घटेको हुन्छ, मृगौलाको फिल्टरेशन दर एञ्जीओटेन्सिन २ मा धेरै निर्भर हुन्छ, त्यसैले एआरबीहरूले यस अवस्थामा लिने क्रममा मृगौलाको कार्यमा थप सम्झौता गर्न सक्छ।
एआरबीहरू बिरामीहरूले लिनु हुँदैन जो एसीई अवरोधकर्ताहरू वा सिधा रेनिन-इनहिबिटरहरू (डीआरआई) प्रयोग गर्दै छन्। Tekturna (aliskiren)। सबै तीन प्रकारका औषधीहरू रेनिन-एंजियोटेंसिन प्रणालीमा काम गर्दछन् र तिनीहरूलाई सँगै लगेर रेन्डल कमजोरी, हाइपरकेलेमिया, र हाइपोटेंशनको जोखिमलाई मिल्दछ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि सम्भावित खतरनाक लागूपदार्थको अन्तर्क्रियाबाट बच्न तपाईका डाक्टरले लिनु भएका सबै औषधिहरु बारे सचेत छ।
के तपाइँ गर्भवती वा स्तनपानको समयमा एआरबी लिन सक्नुहुन्छ?
एक गर्भवती हुन सक्छ जस्तो लाग्ने बित्तिकै एआरबी लिन रोक्नुहोस् र तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती हुने र स्तनपानको क्रममा यदि संभव छ भने एआरबीबाट बच्न सकिन्छ। सबै एआरबी औषधिहरूले कालो बक्स बोक्दछ जब गर्भावस्थामा एआरबी प्रयोग गरिन्छ भने भ्रुणलाई सम्भावित हानि वा मृत्युको बारेमा चेतावनी दिन्छ।
के एआरबीहरू नियन्त्रणित पदार्थहरू हुन्?
होईन, एंजियोटेंसिन २ रिसेप्टर विरोधीहरू नियन्त्रित पदार्थहरू होइनन्।
सामान्य एआरबी साइड इफेक्टहरू
निम्नलिखित एरबी लिने क्रममा हुन सक्ने सामान्य पक्षहरू छन्। यो विस्तृत सूची होईन, किनकि यसले केवल सबै एआरबीहरूलाई मात्र साइड इफेक्टहरू समेट्छ। थप साइड इफेक्टहरू यस वर्ग भित्र व्यक्तिगत ड्रगहरू लागि सामान्य हुन सक्छ। यदि तपाईं चिन्ताजनक वा असहनीय साइड इफेक्टको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, अधिक जानकारी र सल्लाहको लागि डाक्टर वा फार्मासिष्टको सल्लाह लिनुहोस्।
माथिल्लो श्वासप्रणाली संक्रमण (URI)
उच्च पोटेशियम (हाइपरक्लेमिया)
अस्थेनिया (कमजोरी वा ऊर्जाको कमी)
एआरबीहरू एक गम्भीर पक्ष प्रभावको लागि परिचित छ जुन एंजियोएडेमा भनिन्छ। जे होस्, ACE अवरोधकर्ताहरूको तुलनामा यो साइड इफेक्ट एआरबीमा कतै कम सामान्य छ। यो साइड इफेक्ट ब्राडीकिनिन, एक भासोडाइलेटिंग पेप्टाइडको कारणले हुन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ जुन सूजन र सूजन पैदा गर्न सक्दछ। एआरबीले ब्राडीकिनिनलाई ACE अवरोधकर्ताहरूको जस्तो तहसम्म बढाउँदैन।
एआरबी को लागत कति छ?
यस वर्गका धेरै औषधिहरू जेनेरिकको रूपमा उनीहरूको ब्रान्ड-नाम समकक्ष भन्दा कम लागतमा उपलब्ध छन्। उदाहरण को लागी, बेनीकार एक -० दिन को आपूर्ति को लागी $ 300 को माथि खर्च गर्न सक्नुहुनेछ। जेनेरिक संस्करण, ओल्मसार्टन, with than भन्दा कममा उपलब्ध छaको साथ एकलकेयर कूपन। जबकि धेरै ब्रान्ड-नाम एआरबी $ २०० भन्दा बढी लागत, सामान्य संस्करण सामान्यतया le 30 भन्दा कम सिंगलकेयर मार्फत खर्च।
एआरबीहरू प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले ढाकेका हुन्छन्, यद्यपि केहि एआरबीहरू अरूलाई भन्दा बढि मनपर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, लोसार्टन सामान्यतया टायर १ औषधीको रूपमा सूचीबद्ध छ - वा रुचाइएको औषधि-जबकि केन्द्रीसारन-हाइड्रोक्लोरोथाईसाइड जस्तो केहि संयोजन औषधिहरू सबैमा कभर हुन सक्दैन। थप रूपमा, तपाईंको बीमा योजनाले बिरामीको प्रिस्क्रिप्शनमा संकेत गरिएको निदानको आधारमा कभरेज निर्धारण गर्न सक्छ। उच्च रक्तचाप कभरेन्ट कवरेज गर्न सम्भावित निदान हो।
यदि एक बीमा योजना तपाइँको औषधि कभर गर्दछ, यो कम खर्चिलो लाग्न सक्छaएकलकेयर कूपन ।
जेनेरिक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकरहरूको एक सिंहावलोकन , कम फार्मासिष्ट
अन्य रोकथाम विरोधी माइग्रेन उपचार: ACE अवरोधकर्ताहरू, एआरबीहरू, क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू, सेरोटोनिन विरोधी, र NMDA रिसेप्टर विरोधीहरू , न्यूरोलोजीमा वर्तमान उपचार विकल्पहरू
१० करोड भन्दा बढी अमेरिकीहरूले उच्च रक्तचाप पाएका छन् , अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन
एआरबीका साथ बिभिन्न चिकित्सीय विकल्पहरू। कुन दिने? कहिले? किन? , अमेरिकी जर्नल कार्डियोभास्कुलर ड्रग्स
KDIGO २०21 क्रोनिक किडनी रोगमा रक्तचापको व्यवस्थापनको लागि क्लिनिकल अभ्यास मार्गनिर्देशनहरू , किडनी अन्तर्राष्ट्रिय
वयस्कहरूमा एपिसोडिक माइग्रेनको रोकथाम उपचारमा एंजियोटेंसिन रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम इनहिबिटरहरू र एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लकरहरूको प्रभावकारिता। , वर्तमान दुखाई र टाउको दुख्ने रिपोर्टहरू
मधुमेह भएका बुजुर्ग बिरामीहरूमा एंजियटेंसिन २ रिसेप्टर नाकाबन्दीको प्रभावकारिता र सुरक्षा। अमेरिकी मधुमेह संघ
एन्जियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकरहरू ट्यूबलर सोडियम पुन: अवशोषण दबाएर रक्तचापको सर्कडियन ताल बदल्छ। , अमेरिकन जर्नल अफ फिजियोलोजी
हाइपरक्लेमिया एंजियोटेंसिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम इनहिबिटरहरू र एंजियोटेन्सिन रिसेप्टर ब्लकरहरूसँग सम्बन्धित , हृदय चिकित्सा
Angiotensin II रिसेप्टर ब्लॉकर (एआरबी) - स्ट्याटपर्लहरू
एंजियोटेन्सिन-रूपान्तरण गर्ने एन्जाइम इनहिबिटरहरू र रिसेप्टर ब्लकरहरू मुटुको विफलता र दीर्घकालीन किडनी रोग - डिमासिफाइंग विवादहरू - भारतीय हार्ट जर्नल
के तपाइँ नेक्सियम र ओमेप्राजोल सँगै लिन सक्नुहुन्छ
कति पटक तपाइँ ibuprofen 400 लिन सक्नुहुन्छ
एप्पल साइडर सिरका मेरो लागी के गर्छ
कहिले सम्म एक हर्पीस प्रकोप valtrex संग अन्तिम हुन्छ
कति बीमा बिना डाक्टर जान को लागी खर्च लाग्छ